Usoro na ọnọdụ - GBL Europe BV
Site na ịzụta na ịnakwere ọnọdụ ọkụ na ọnọdụ anyị site na ụlọ ahịa anyị anyị na-egosi na y-butyrolactone nke anyị na-enweta n'aka GBL Europe BV ejighị ya maka imepụta ma ọ bụ imepụta ngwa agha kemịkalụ, ngwa agha ma ọ bụ imepụta ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ọgwụ psychotropic. Onye na-azụ ahịa ga-eji ngwaahịa ahụ naanị maka nhicha ma ọ bụ ịgbasa nzube. Onye na-azụ ahịa kwenyere na ngwaahịa ahụ agaghị ebugharị ma ọ bụ ebugharị ya site na ha ozugbo ma ọ bụ na ọ bụghị.
GBL Europe BV Usoro na ọnọdụ
Ndị a bụ ụlọ ahịa weebụ Usoro Okwu na Ọnọdụ. Usoro iwu a na ọnọdụ niile dị mgbe ị na - eji weebụsaịtị anyị ma ọ bụ tinye iwu site na weebụsaịtị anyị, ha nwere ozi dị mkpa maka gị dịka onye na - azụ ahịa. Biko gụọ ha nke ọma. Anyị na-adụkwa ọdụ ka ị chekwaa ma ọ bụ bipụta Usoro Iwu na Ọnọdụ Ndị a niile ka ị nwee ike ịkpọtụrụ ha ma emesịa.
GBL Europe BV: nke edere na Netherlands ma edebanye aha ya na ụlọ ọrụ azụmahịa n'okpuru nọmba faịlụ 71008470, na-azụ ahịa dịka GBL Europe.
Weebụsaịtị: websaịtị / ụlọ ahịa weebụ nke GBL Europe BV, ka a ga-ahụ na https // cleanandsolve.com HTMLtps: //gbl-europe.com na ebe subdomain ya niile dị.
Onye ahịa: onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ nke ọrụ ma ọ bụ azụmahịa na-abanye na nkwekọrịta na GBL Europe BV na / ma ọ bụ debanye aha ya na weebụsaịtị.
Nkwekọrịta: nhazi ọ bụla ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla n'etiti GBL Europe BV na ndị ahịa nke Usoro Iwu na Ọnọdụ bụ akụkụ dị mkpa.
Usoro General na Ọnọdụ: Usoro Iwu a.
Ntinye nke General Usoro na Ọnọdụ
Usoro iwu na ọnọdụ niile dị na onyinye niile, nkwekọrịta na nnyefe nke GBL Europe BV, belụsọ na edere nke ọma na ederede.
Ọ bụrụ na onye ahịa ya n’usoro, nkwenye ma ọ bụ nkwukọrịta ọ bụla ọzọ nke na-ekwu na ịnakwere izuru Okwu na Nkwekọrịta gụnyere ihe ọ bụla dị iche na ruo ugbu a GBL Europe BV anabatala ha na ederede.
N'ọnọdụ ebe ngwaahịa na ọnọdụ ọrụ akọwapụtara na ọnọdụ na ọnọdụ dị iche iche na-adị na mgbakwunye na usoro na ọnọdụ ndị a, Onye ahịa nwere ike ịkpọ oku ọnọdụ dị mma kachasị amasị ya ma ọ bụrụ na ọnọdụ usoro na ọnọdụ dakọtara.
Ahịa na ozi
Ọnụahịa niile edere na weebụsaịtị yana ihe ndị ọzọ sitere na GBL Europe BV gụnyere ụtụ isi na ụgwọ ndị ọzọ gọọmentị tiri, belụsọ na ekwuputaghi na weebụsaịtị ahụ.
Ọ bụrụ na eburu ụgwọ mbupu ụgwọ, a ga-ekwupụta nke ọma n'oge dị mma tupu emebie nkwekọrịta ahụ. A ga-egosikwa ego ndị a iche iche na usoro ịtụ.
Ejiri ọdịnaya kachasị dị na weebụsaịtị wee lekọta ya anya. GBL Europe BV agbanyeghị, ekwenyeghi na ozi niile dị na Weebụsaịtị ziri ezi ma zuo oke n'oge niile. Ọnụahịa niile na ozi ndị ọzọ edepụtara na weebụsaịtị na ihe ndị ọzọ sitere na GBL Europe BV dị n'okpuru mmemme doro anya na ndehie edepụtara.
GBL Europe BV enweghị ike idobe ya maka ọghọm nke agba na-esite n'ịdị mma nke agba gosipụtara na ihuenyo.
Mmechi nke nkwekọrịta a
Ekwesịrị ka ekwenye na nkwekọrịta a n'oge onye ahịa na-anabata onyinye GBL Europe BV dabere n'ọnọdụ GBL Europe BV debere.
Ọ bụrụ na onye ahịa anatala onyinye ahụ site na iji kọmputa, GBL Europe BV ga-anata nnata nke nnabata site na ntanetị n'egbughị oge. Ruo mgbe enwetara nnabata nnabata a, onye ahịa ga-enwe ike igbagbu nkwekọrịta ahụ.
Ọ bụrụ na achọpụtara na, na ịnabata ma ọ bụ na-abanye na Nkwekọrịta ahụ, Onye ahịa enyewo data na-ezighi ezi, GBL Europe BV ga-enweta ntinye aka ziri ezi nke ọrụ nke onye ahịa ruo mgbe anata data ziri ezi.
Iji jiri Weebụsaịtị ahụ rụọ ọrụ kachasị, Onye ahịa nwere ike ịdebanye aha site na iji mpempe ndebanye / nhọrọ nnabata akaụntụ na weebụsaịtị.
N'oge usoro ndebanye aha, a ga-arịọ Onye ahịa ka ọ họrọ aha njirimara na paswọọdụ nke ọ nwere ike ịbanye na weebụsaịtị. Onye ahịa naanị bụ ọrụ maka ịhọrọ paswọọdụ zuru ezu ịdabere.
Onye ahịa ahụ kwesiri idebanye nzere ya, aha njirimara na paswọọdụ nzuzo nzuzo. GBL Europe BV enweghị ike ịnabata ikpe ọ bụla iji nzere nbanye ọ bụla wee nwee ikike iche na Onye ahịa na-abanye na weebụsaịtị bụ otu ọ na-ekwupụta na ọ bụ. Onye ahịa na-ahụ maka ma na-enwee ihe iyi egwu niile na arụmọrụ na azụmahịa a na-eme site na akaụntụ Onye ahịa.
Ọ bụrụ na onye ahịa mara ma ọ bụ nwee ihe mere ọ ga-eji chee na nkọwapụta nbanye ya abanyela ndị ọzọ na-akwadoghị, a ga-achọ ya gbanwee paswọọdụ ya ozugbo enwere ike yana / ma ọ bụ igosipụta GBL Europe BV dị ka o kwere mee ka GBL Europe BV were. ihe kwesiri ekwesi.
Mmezu nke nkwekọrịta ahụ
Ozugbo GBL Europe BV natara ikike ahụ, ọ ga-eziga ngwaahịa ndị ahụ na Client n'egbughị oge yana ịkwanyere ndokwa nke paragraf 3 nke isiokwu a.
Ikike GBL Europe BV ka enyere ndi ọzọ aka na mmezu nke oru ha n'okpuru Nkwekọrịta a.
Tupu ụbọchị a ga - eme ihe nkwekọrịta ahụ, a ga - eziga ozi na weebụsaịtị nke ga - akọwa n'ụzọ zuru oke ụzọ aga - ewepụta ngwaahịa ndị ahụ. Ọ bụrụ na ekwenyeghi ma ọ bụ kwupụta okwu nnyefe, ngwaahịa ga-ebuga ya n'ime ụbọchị 30 kachasị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na GBL Europe BV enweghị ike ịnapụta ngwaahịa ndị ahụ n'ime oge ekwenye, ọ ga-agwa onye ahịa ya dabere. N'okwu ahụ Onye ahịa nwere ike ikpebi ikwe ka ụbọchị nnyefe ọhụụ ma ọ bụ kagbuo nkwekọrịta ahụ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla.
GBL Europe BV na-adụ onye ahịa ọdụ ka inyocha ngwaahịa ndị ahụ mgbe ha nyefere ya ma kọọ ntụpọ ọ bụla n'ime oge kwesịrị ekwesị, ọkacha mma na ederede ma ọ bụ site na email. Maka inweta nkọwa ndi ozo, lee edemede banyere nkwa na nkwekorita.
Ihe egwu dị na ngwaahịa a ga-ebufe ya na onye ahịa ozugbo enyefe ngwaahịa ndị ahụ na adreesị nnyefe ekwenye.
Ọ bụrụ na enweghị ike inyerịrị ngwaahịa enyere n'iwu, GBL Europe BV nwere ikike ịnapụta ngwaahịa dị ka okike na njiri mara maka ngwaahịa enyere n'iwu. N'okwu ahụ, Onye ahịa ga-enwe ikike iwepu nkwekọrịta ahụ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla na iweghachi ngwaahịa ahụ n'efu.
Ikike mwepu / nlaghachi
Onye Ahịa ga-enwe ikike iwepu nkwekọrịta dị anya na GBL Europe BV n'ime ụbọchị kalenda 14 mgbe ị natara ngwaahịa ahụ, na-akwụghị ụgwọ na enweghị ihe kpatara ya. Ndị na-azụ ahịa nabatara ngwaahịa ụbọchị na-esote ahịa ihe ma ọ bụ ndị ọzọ họpụtara maka ngwaahịa ahụ, ma ọ bụ:
- ọ bụrụ na nnyefe nke ngwaahịa gụnyere nnyefe ma ọ bụ akụkụ dị iche iche: ụbọchị nke Onye ahịa, ma ọ bụ ndị ọzọ nke Onye ahịa họpụtara, natara nnyefe ikpeazụ ma ọ bụ akụkụ ikpeazụ;
- enwere nkwekọrịta maka inyefe ngwaahịa mgbe niile n'oge enyere: ụbọchị nke Client, ma ọ bụ ndị ọzọ atọ nke onye ahịa họpụtara, nwetara ngwaahịa ikpeazụ;
- ọ bụrụ na onye ahịa nyere iwu ngwaahịa dị iche iche: ụbọchị nke onye ahịa, ma ọ bụ onye ọzọ nke Onye ahịa họpụtara, nwetara ngwaahịa ikpeazụ.
Naanị ego akwụ ụgwọ maka mbugharị ụgbọ mmiri bụ maka akaụntụ Onye ahịa. Nke a pụtara na onye ahịa ga-akwụ ụgwọ mmeghachi nke ngwaahịa a. Akwụghachi mbupu ọ bụla nke Onye ahịa kwụrụ na ọnụ ahịa ịzụta maka ngwaahịa a ga-akwụghachi onye ahịa ya ma ọ bụrụ na akpọghachi iwu ahụ dum.
N'oge oge ndọrọ ego ahụ e zoro aka na paragraf 1 dị n'elu, Onye Ahịa ga-emeso ngwaahịa ahụ na nkwakọ ngwaahịa ya na nlekọta kachasị. Onye ahịa nwere ike mepee nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ jiri ngwaahịa ahụ belụsọ na ihe a dị mkpa iji chọpụta ụdị ngwaahịa, njirimara na ọrụ ha.
Onye ahịa na-akwụ ụgwọ maka nrụda ngwaahịa nke bụ nsonazụ nke ijikwa ngwaahịa ahụ karịa ka enyere ya.
Onye Ahịa nwere ike igbagbu nkwekọrịta ahụ na paragraf 1 nke isiokwu a site na ịkọwa ndọrọpụ (dijitalụ ma ọ bụ n'ụdị ọzọ) na GBL Europe BV, n'ime oge ndọrọ ego, site na mpempe ụdị maka ikike iwepụ ma ọ bụ na ụfọdụ enweghị nkwekọrịta ndị ọzọ. ụzọ. Ọ bụrụ na GBL Europe BV na-eme ka o kwe onye ahịa ike ikwuputa ọpụpụ ya site na ụzọ elektrọnik / dijitalụ, mgbe ị natachara nkwupụta dị otú ahụ, GBL Europe BV na-eziga nkwenye ozugbo na nnata.
Ngwa ngwa o kwere mee, mana oge agaghị aga n’ihu ụbọchị 14 mgbe ụbọchị mkpesa dịka e zoro aka na paragraf 1, Onye ahịa ga-eweghachi ngwaahịa ahụ, ma ọ bụ nyefee ya (onye nnọchi anya) GBL Europe BV. Onye ahịa nwere ike izipu ngwaahịa ahụ ozugbo na GBL Europe BV na-enweghị ọkwa ngosi banyere oge tupu oge akpọrọ na kọlụm 1 Onye ahịa ga-etinyerịrị na nke a, tinye ọkwa edere banyere mwepu, dị ka ụdị ihe nlereanya.
Enwere ike weghachite ngwaahịa na adreesị ozi a:
A ga-akwụghachi onye ahịa ihe mbụ ndị ahịa kwụrụ ụgwọ (na mbido) ya na onye ahịa ozugbo o kwere mee, na n'ọnọdụ ọ bụla n'ime ụbọchị 14 mgbe ngabiga nke nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ na Onye Ahịa họọrọ usoro izipu dị oke ọnụ karịa nke nnyefe ego dị ọnụ ala, GBL Europe BV agaghị akwụghachi ụgwọ nke usoro dị ọnụ ọnụ karịa.
Ewezuga oge GBL Europe BV wepụtara iweghachite ngwaahịa ahụ n'onwe ya, ọ nwere ike yigharịghachi nkwụghachi ruo mgbe ọ natara ngwaahịa ahụ ma ọ bụ ruo mgbe onye ahịa gosipụtara na ọ weghachite ngwaahịa ahụ, dabere na nke pụtara na mbụ.
A ga-edebanye ozi gbasara itinye n'ọrụ ma ọ bụ itinyeghị ikike nke ikike ịwepu na usoro ọ bụla achọrọ ka o doo anya na weebụsaịtị, nke ọma tupu emebie nkwekọrịta ahụ.
Onye ahịa ahụ ga-akwụ ego ahụ ruru GBL Europe BV dabere na usoro ịtụ yana usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla egosipụtara na weebụsaịtị. GBL Europe BV nwere ohere ịnye usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla nke nhọrọ ya, ọ nwere ike ịgbanwe usoro ndị a n'oge ọ bụla.
Akwụkwọ ikike na ịkwekọrịta
Edemede a na-emetụta ma ọ bụrụ na Onye ahịa anaghị arụ ọrụ na ọkachamara ma ọ bụ nke azụmahịa. Ọ bụrụ na agbanyeghị na nke ikpeazụ, GBL Europe BV na-enye nkwa dị iche na ngwaahịa, nke a metụtara ụdị ndị ahịa niile.
GBL Europe BV na-ekwe nkwa na ngwaahịa mejupụtara Nkwekọrịta ahụ, nkọwapụta atọrọ na onyinye ahụ, ihe ezi uche dị na ya nke ịdị mma na / ma ọ bụ ojiji yana usoro iwu na / ma ọ bụ ụkpụrụ gọọmentị na-arụ ọrụ na ụbọchị nke aka nkwekọrịta ahụ. Ọ bụrụ na ekwenyechara, GBL Europe BV ga-ekwekwa nkwa na ngwaahịa dị mma maka ebumnuche na-abụghị maka iji ya.
Onyinye ọ bụla nke GBL Europe BV nyere, onye nrụpụta ma ọ bụ onye mbubata agaghị emetụta ikike iwu na nkwuputa nke onye ahịa nwere ma ọ nwere ike ịkpọku site na nkwekọrịta ahụ.
Ọ bụrụ na ngwaahịa apụtara wepụtara afọ ojuju nkwekọrịta ahụ, onye ahịa nwere ike ịgwa GBL Europe BV otu oge n'ime oge ezi uche gachara mgbe ịchọtara ntụpọ ahụ.
Ọ bụrụ na GBL Europe BV chere na mkpesa ahụ bụ nke ezi ntọala, ngwaahịa ndị echebara echiche ga-edozi, dochie ma ọ bụ nkwụghachi na ndị ahịa. Dabere na Nkwupụta banyere ụgwọ, nkwụghachi ahụ enweghị ike ịfe ọnụahịa a na-akwụ maka ngwaahịa site n'aka Onye ahịa.
Ijikwa usoro mkpesa
Ọ bụrụ na Onye Ahịa nwere mkpesa ọ bụla n'ihe metụtara ngwaahịa (dabere na isiokwu banyere akwụkwọ ikike na nkwekọrịta) yana / ma ọ bụ banyere akụkụ ndị ọzọ nke GBL Europe BV ọrụ ya, ọ nwere ike nyefee mkpesa site na ekwentị, site na email ma ọ bụ site na post. Hụ nkọwapụta kọntaktị na ala nke General Usoro na Ọnọdụ.
GBL Europe BV ga-aza mkpesa ahụ ozugbo enwere ike, na okwu ọ bụla n'ime ụbọchị 1 mgbe ị natasịrị ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume maka GBL Europe BV iji mepụta mmeghachi omume dị ukwuu na mkpesa ahụ n'oge ahụ, GBL Europe BV ga-egosi nnata nke mkpesa ahụ n'ime ụbọchị 1 mgbe ọ natasịrị ya ma gosipụta oge okwu ọ chọrọ. inwe ike inye mmeghachi omume doro anya ma ọ bụ eziokwu doro anya na mkpesa Onye ahịa.
Edemede a naanị ma ọ bụrụ na onye ahịa bụ onye sitere n'okike ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu na-arụ ọrụ na ọkachamara ma ọ bụ nke azụmahịa.
Onu ahia zuru oke nke GBL Europe BV n'ihe banyere onye ahịa n'ihi nha anya ha mezuru nkwekorita a bu nke anabataghi ego ekwughi na aka nkwekorita obula (tinyere VAT).
Ibu nke GBL Europe BV n'ihe banyere onye ahịa maka mmebi ma obu mmebi na-adighi nma, nke obula o bula esighi –ebughi oke na mmebi ndi ozo, uru a lara n'iyi, ndofu ego furu efu, mfu nke data na mmebi nke nkwụsị ahia. ewepuru.
Ewezuga ikpe ndị e zoro aka na ya na paragraf abụọ gara aga nke Nkeji edemede a, GBL Europe BV anaghị edo onwe ya n'okpuru onye ahịa maka mmebi ahụ, n'agbanyeghị ala ebuso oke mmebi a dabere. Ihe mgbochi edepụtara na Nkeji edemede a ga-akwụsị ị toomi ma ọ bụrụ na mbibi ma ọ bụ mfu bụ nsonazụ ma ọ bụ nleghara anya n'akụkụ GBL Europe BV.
GBL Europe BV ga-akwụ ụgwọ maka Onye Ahịa na akaụntụ maka nnabata njiri mara na arụmọrụ nke nkwekọrịta ma ọ bụrụ na Onye ahịa enye ọkwa ngosipụta nke ndabara na GBL Europe BV n'egbughị oge gosipụta oge ezi uche oge iji dozie ọdịda, na GBL Europe BV na-aga n'ihu na-emezughị ọrụ ya mgbe oge ahụ gasịrị. Ofma ama ndaba ga-ebu ụzọ kọwaa ọdịda maka ọtụtụ ihe enwere ike iji mee ka GBL Europe BV wee nye nzaghachi zuru oke.
Ihe omume ọ bụla na-enye ikike ịkwụghachi ụgwọ bụ ihe a na-eme mgbe niile na ọnọdụ ndị ahịa na-akọ na mbibi ma ọ bụ mfu edere na GBL Europe BV ozugbo enwere ike, mana oge agaghị agafe n'ime ụbọchị 30 mgbe mbibi ma ọ bụ mfu ahụ bilitere.
N'ọnọdụ ihe ike majeure GBL Europe BV agaghị akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka mmebi ma ọ bụ mfu ọ bụla onye ahịa wetara n'ihi ya.
Ọ bụrụhaala na onye ahịa akwụbeghị ụgwọ ọ bụla zuru oke na mkpokọta kwenyere GBL Europe BV ga-ejigide nwe ngwaahịa niile ebutere.
Nkọwa onwe onye
GBL Europe BV ga-ahazi nkọwapụta nke onye ahịa dị na nkwupụta nzuzo nke edepụtara na weebụsaịtị.
A na-achịkwa nkwekọrịta a site na iwu obodo nke nguzobe ụlọ ahịa weebụ.
Agbanyeghị dịka iwu siri ike, a ga-edoba esemokwu ọ bụla nke sitere na nkwekọrịta ahụ n'ụlọ ikpe Dutch ruru eru na mpaghara ebe GBL Europe BV nwere ụlọ ọrụ.
Ọ bụrụ na esetịpụri na usoro iwu na Ọnọdụ ndị a ga-abụ ihe efu, nke a agaghị emetụta ịdị adị nke General Usoro na Ọnọdụ niile. N'okwu ahụ, Ndị otu ahụ ga-edobe otu ihe ọhụrụ ma ọ bụ karịa na nnọchi nke ga-egosipụta ndokwa mbụ dịka o kwere omume n'okpuru iwu.
Okwu a 'edere' na usoro iwu Izugbe a na-egosikwa nkwukọrịta site na ozi email na faksị, ma ọ bụrụhaala na ejirila ozi email ahụ guzosie ike nke ọma.
Ọ bụrụ n’inwe ajụjụ ọ bụla, mkpesa ma ọ bụ kwuo mgbe ị gụchara Usoro Okwu na Ọnọdụ a, biko kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ leta.
Berlọ azụmahịa: 71008470
Ndebanye aha REACH: GM486603-26
Ọ bụghị maka oriri ma nwee ike igbu egbu ma ọ bụrụ na i rie ya